सानेपा मुना प्र’करण : पूर्वसचिव कार्कीमाथि नै ७ गहन प्रश्न उठाउने यी युवती मिडियामा (भिडियो) - Sidha News
काठमाडौं। ललितपुरको सानेपामा घरमै रहेका कामदारबाट ह त्या गरिएकी मुना कार्की र विजय दुवैको मोबाइल लिएर अनु’सन्धान जारी राखेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती मुनाको सोमबार घरमै ह त्या भएको थियो । उनको ह त्यापछि विजय चौधरीले दे ह त्या ग गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अहिले दुवैजनाको मोबाइल डिटेल हेर्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस बिषयमा कलाकार तथा संचारकर्मी सविता भट्टराईले ७ वटा प्रश्न उब्जाएकी छिन् । कलाकार भट्टराईले पूरा सिसिटिभी सार्वजनिक गर्न माग गर्दै ७ वटा प्रश्न उब्जाएकी हुन् ।
१ मुना कार्किलाई चौधरिले ह त्या गरेर चौधरिले आफैले दे ह त्या ग गरे भनिएको छ । ल अब तपाईहरु नै भन्नुस पुर्व सचिव कार्कि मन्दिरबाट घरमा फर्किदा मुनाको शरीर तातै थियो र उनलाई हस्पिटल लगियो तर चौधरि पछि बाट दे ह त्या ग गर्ने चौधरिको शरीर किन चिसो शंका यहाँ छ ।
३ हिन्दु धर्मको मान्यता अनुसार श्रीमती महिनावारी भएको बेलामा धार्मीक काम गर्नका लागि श्रीमान पनि अपवित्र मानिन्छन् । रुद्रि पुजा श्रीमतीबीना एक्लै गरिदैन । तर मुनालाई घरमा म हिनावारी भएको बेलामा एक्लै छोडेर पूर्व सचिव त्यही समयमा पुजा लगाउन भन्दै पशुपति मन्दीर किन गए ?
७ गायीका आस्था राउतको घ टनामा सामान्य विषयमा पनि सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्ने प्रहरीले यस्तो विवादास्पद घ टनाको भिडियो किन सार्वजनिक गर्दैन ?
बाँकी तलको भिडियोमा हेर्नुहोस्:
कोरोना महामारीसँगै कन्डमको अभाव
लकडाउनको अवधि बढाउने अन्तिम तयारी, चिकित्सक
चीनबाट नेपाल पठाउने भनिएको कोभिड–१९ परीक्षण
बास्कोटापछि मन्त्री ढकाल पनि करोडौँको भष्टाचारकाण्डमा